I-"hora elingu-X "elilindile isikhathi eside lisondela ... Uhlezi ezikhwameni, lapho izinto zakho ezincane ezinganeni ezincane zihle. Naphezu kokuthi yonke into ibonakala ikulungele ezingeni eliphakeme kakhulu, ukuzamazama okuncane okwamanje kusenza uzizwe ... Ungesabi, ukubeletha akukwesabeki! Kungenzeka ukuthi kuzoba lula kuwe, uma wazi: ukuthi ukuhanjiswa kwenzeka kanjani, izinhlobo zabo nezinkinga.
Ulwazi ngalokhu kuzosiza umama ukuthi ahlanganyele nodokotela kangcono, ukulungisa ngokwengqondo, okuzoholela ekungabikho kokulimala nokuzalwa kwengane enempilo. Owesifazane okhulelwe kudingeka akhumbule ukuthi indlela yokudiliva eyenzeka ngayo, ukubukeka kwawo nezinkinga ezingase ziphakame kuncike ekutheni uzwela kakhulu - ngakho-ke, ulwazi olufakwe kulesi sihloko kufanele luqinisekise ukuthi azikho izimo ezingenathemba.
Inqubo yokubeletha ihlukaniswe ngezikhathi ezintathu eziyinhloko: ukuvulwa komlomo wesibeletho, isisu kanye ne-postpartum period.
Ukudalula . Lesi sikhathi yisikhathi eside kakhulu. Ingahlala emahoreni angu-10 ku-primipara futhi amahora angu-6-7 angalungile. Ukuqina nobude bezinqamuzana ngalesi sikhathi kwanda kusuka kumasekhondi angu-10 kuya kwesigamu semizuzu nesigamu, futhi isikhathi sinciphisa kusuka kwikota kuya kwehora elilodwa. Umgomo oyinhloko walesi sikhathi ukuvulwa komlomo wesibeletho, okwenzeka ngaphansi kwethonya lokulwa. Lapho intamo ivuliwe ngokuphelele, ikhanda le-fetal liwela emgodini we-pelvic. Ukuzalwa kanjani kule nkathi? Ibuhlungu kakhulu, kodwa hhayi obubucayi. Ukwazi indlela yokuphefumula, ungamelana nokulwa, kungakhathaliseki ukuthi bunzima kangakanani. Izinkinga ngesikhathi kuvulwa umlomo wesibeletho ngokuvamile akenzi.
Ukuxoshwa kwe-fetus yisigaba sesibili sokusebenza. Isikhathi esiphakathi sisuka emahoreni owodwa kuya kwamabili kubafazi abakhulu, futhi ngaphansi kwehora kubesifazane besifazane. Dlula ukubeletha ngalesi sikhathi kanjalo: uma ikhanda lomntwana liwehliselwa phansi, imizamo yengezwe empini, okuyizingqinamba zezingxube zesisu nesisu somzimba. Ubude bomzamo cishe ngomzuzu. Siyabonga, ukucindezeleka okukhuphukeni kwesisu, okuyinto ehambisana nokucindezela kwe-intrauterine kuvumela ingane ukuba ihambisane nomgwaqo wokuzalwa. Ukuhlaselwa kuvela ngokungazibandakanyi, kodwa uma kunesidingo, owesifazane angabaqinisa noma abavimbele.
Ngalesi sikhathi, kunenkinga enjenge-soft tissue rupture engenzeka. Ukuze ugweme lokhu, lapho ingane idlula udokotela kungenza ukuqubuka kwe-perineum, elandela ukuzalwa kwe-placenta izovalwa nge-anesthesia yendawo. Lokhu kungenelela kokuhlinzwa kuvamile kakhulu ngesikhathi sokubeletha futhi kufanele kulungiselelwe. Kumele kukhunjulwe ukuthi esikhathini esizayo kungase kube nesidingo sokuphahlazeka kwesifazane.
Isikhathi sesithathu, owokugcina , esifushane kakhulu, sithatha
cishe amaminithi angu-10, kodwa kwezinye izimo zingadlulela kuhhafu yehora. Ngalesi sikhathi, intambo ye-umbilical ihlukanisiwe, eyayibopha ngokuqinile kumntwana. Ngokuvamile namuhla, odokotela banethemba lokuphathwa kabi kukababa, uma ekhona lapho ezalwa. Azikho izinzwa ezibuhlungu nezinkinga ezizwakala umama noma ingane ngalesi sikhathi, ngoba azikho izimpendulo ezibuhlungu emthonjeni.
Ngemuva kokubeletha, kwenziwa izinqubo ezijwayelekile: ukuhlolwa, ukucubungulwa kwesilonda, ukulinganisa, ukulinganisa. Emgodini wengane ubeka uphawu ngegama. umama, usuku nosuku lokuzalwa kwengane, kanye nesibonakaliso sephansi. Lezi zimbuzi zamathebula ezihlonishwayo zigcinwa konke ukuphila, ngezinye izikhathi zibonisa izingane zabo sezikhulile kakade.
Ukulwa okuncane, okukhona okwamanje, kunqamula i-placenta kusukela endaweni ye-intrauterine, futhi ngemva kwenani elincane lemizamo, lesi sizukulwane sizalwa. Kuphela emva kwalokhu, ukuzalwa kungacatshangwa kuqedile.
Izinhlobo eziyisisekelo zokubeletha
Igalari imisiwe . Phakathi kwezinzuzo eziyinhloko zalolu hlobo lokulethwa yizinto ezilandelayo:
1. Ukulawulwa kwezempilo okuqhubekayo kwesimo sakho
2. Ukulawula okungenangqondo kwe-fetus.
3. Ukutholakala kokunakekelwa kwezimo eziphuthumayo (kunezikhathi eziningi izimo eziphuthumayo ezidinga ukwenziwa noma ukuvuselelwa)
4. Ukuba khona kwengane ngesikhathi sokuzalwa.
5. Ukuhambisana nemigomo ejwayelekile yokuhlanzeka.
Kodwa kunezinye izinkinga ezingezona ezihambisana nokulethwa kweziguli, isibonelo ukuthi ukufakwa kwesibhedlela kungakuvimbela ukuba uphumule. Noma, isibonelo, iqiniso lokuthi ungakwazi ukubeka ngokungadingekile kuwe kanye namalungiselelo omntwana.
Ukulethwa ngokuqondile kuyindlela yokudiliva lapho kuthathwa embhedeni endaweni yowesifazane onemilenze egobile futhi ehlukaniswe ezinhlangothini. Emazweni esifundeni sase-Asia, abesifazane bavame ukubeletha ngama-haunches, noma babekwe emibhedeni ekhethekile, banikeze owesifazane endaweni eqondile.
Izinzuzo zalezi zizalo ziwukuthi ngeke uzizwe ungakhululekile phakathi nenqubo yonke. Ngaphezu kwalokho, ubuhlungu buyoba buthakathaka kakhulu, buthaka. Isikhathi sesibili sokusebenza kuleli cala uvame ukude isikhathi eside kunokujwayelekile. Futhi ekugcineni kodwa, mhlawumbe, okubaluleke kakhulu: ukubeletha ngokuqondile kunciphisa amathuba okulimala okungahambi kahle komntwana osanda kuzalwa.
1. I-perineum yowesifazane wesifazane ubonakala kahle, engavumeli ukunikeza "ukuvikelwa" okuhle kwabasebenzi bezokwelapha.
2. Inombolo yezikhala ezijulile zanda (hhayi ukuthi kunjalo, noma kunjalo).
3. Kunzima ukuqapha ingane.
4. Imibhede ekhethekile iyadingeka.
Ukubeletha emanzini . Kumele kuphawulwe ngokushesha ukuthi ubuhlungu bokuzalwa buyancipha emanzini. Ukufeza lolu hlobo lokulethwa kwezidingo, kusetshenziselwa i-pool ekhethekile, amanzi angakaze adluliselwe, lapho kutholakalwa khona usawoti olwandle. Kuvunyelwe ukusebenzisa uhlelo lwe-whirlpool, okuvumela owesifazane ukuba aphumule futhi abe nomphumela omuhle. Kumele kuqashelwe ukuthi inqubo ngokwayo isesesihlalo. Izinzuzo:
1. Ubude besikhathi sokuqala buyancipha.
2. Kunomthelela omkhulu we-analgesic.
Izinkinga ezingathí sina lolu hlobo lokulethwa alukho, ngoba kungenzeka ukuthi izinkinga ezinkulu ezimweni ezimilayo zokwenza igesi ukuze zimanzi, njengombuso, azikho.
Futhi ukuzalwa komusa kokugcina-ekhaya. Lapha, empeleni, into esemqoka yisimo esiseduze nowesifazane obelethayo. Kodwa-ke, izinkinga ezimbalwa eziphawulekayo ngokuvamile ziyesaba omama abalindele. Phakathi kwabo:
1. Ukungabi nokuqapha isimo sakho.
2. Ukungabi nokuqapha isimo somntwana (kubalulekile hhayi nje kuphela ukulalela ukushaya kwenhliziyo, kodwa futhi nokugcizelela ezinkingeni).
3. Izinga leziqu zabasebenzi ziphansi kakhulu.
4. Amathuba aphezulu ekufeni kwengane ngenxa yokunakekelwa kwezempilo okungafanelekile.
Iphuzu lokugcina ngokuvamile liba liqonde ekukhetheni umama ekubelethweni - ngoba ukubeka ingozi yengane ukuze ibelethe endaweni yendawo akuyona into engafanelekile!
Amadoda aziphatha kanjani emva kokuzalwa komkakhe?
Ukubuyiselwa emva kokubeletha, ngcono impilo
Izincomo, indlela yokuziphatha nomuntu onjengawe?
Amazambane amazambane zrazy ngamakhowe
Izimpawu - ukuguga isikhumba
I-Horoscope ye-Love for 2015 nge-Aquarius
UDorado nge-anchovy sauce
Owesifazane okahle ufuna umuntu ophelele
Ungakugwema kanjani ukungqubuzana phakathi kwendoda nowesifazane?
I-varnishes enemfashini yezipikili, Autumn-Winter 2015-2016